Fourth Joint Working Group Meeting on Repatriation of Displaced Myanmar Residents from Bangladesh will be held in Myanmar – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
Fourth Joint Working Group Meeting on Repatriation of Displaced Myanmar Residents from Bangladesh will be held in Myanmar
Permanent Secretary U Myint Thu of the Ministry of Foreign Affairs received Mr. Manjural Karim Khan Chowdhury, Ambassador of the People’s Republic of Bangladesh to Myanmar at the Ministry of Foreign Affairs, Nay Pyi Taw at 10 a.m. on5April 2019.
During the meeting, the Permanent Secretary informed the Ambassador that in light of the reciprocal practice of hosting the bilateral meetings, Myanmar will to host the Fourth JWG Meeting on 27 April 2019 in Nay Pyi Taw since the Second and Third JWG Meetings were held in Dhaka in May and October 2018 respectively.
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးမြင့်သူက မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
(၅-၄-၂၀၁၉ ရက်၊ နေပြည်တော်)
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးမြင့်သူသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Manjurul Karim Khan Chowdhury အား ၅-၄-၂၀၁၉ ရက်၊ နံနက် ၁၀ဝ၀ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ယင်းသို့ တွေ့ဆုံရာတွင် အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်က နေရပ်စွန့်ခွာသွားသူများ ပြန်လည်လက်ခံရေးဆိုင်ရာ မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဒုတိယအကြိမ် ပူးတွဲလုပ်ငန်းအဖွဲ့ အစည်းအဝေးအား ၂၀၁၈ ခုနှစ် မေလတွင်လည်းကောင်းနှင့် တတိယအကြိမ် ပူးတွဲလုပ်ငန်းအဖွဲ့ အစည်းအဝေးအား ၂၀၁၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင်လည်းကောင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံက အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပခဲ့ပြီး ဖြစ်ရာ နှစ်နိုင်ငံ အစည်းအဝေးများကို အပြန်အလှန် ကျင်းပလေ့ရှိသည့် မူနှင့်အညီ ယခု စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် ပူးတွဲလုပ်ငန်းအဖွဲ့ အစည်းအဝေးများ ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၇ ရက်တွင် နေပြည်တော်၌ ကျင်းပလိုကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။